Mgba ọgụ megide SARS-COV-2
site na nhazi na 20-02-27
Lụ ọgụ megide SARS-COV-2 Na mbido afọ 2020, otu nwoke akpọghị akpọrọ nkụ mebiri Afọ Ọhụrụ iji nweta isi okwu gburugburu ụwa - SARS-COV-2. Sars-cov-2 na coronaviruse ndị ọzọ na-ekerịta ụzọ yiri mbufe, ọkachasị site na nsị iku ume na kọntaktị. Ihe ...
Know mara otu ngwa ngwa nnwale nnwale si arụ ọrụ？
site na nhazi na 19-12-03
Immunology bu ihe di mgbagwoju anya nke nwere otutu ihe omuma banyere oru. Isiokwu a chọrọ ịme ka ị mata ngwaahịa anyị na-eji asụsụ nghọta dị mkpụmkpụ. N'ebe a na-achọpụta ngwa ngwa, ihe eji eme ụlọ na-ejikarị usoro colloidal ọla edo. A na - ekekọta nanoparticles ọla edo na ọgwụ mgbochi ...
Ndụmọdụ nyocha nke HIV na -eche echiche banyere HIV na-achọ ịgbasa mkpuchi mkpuchi
site na nhazi na 19-03-02
Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) ewepụtala atụmatụ ọhụụ iji nyere mba dị iche iche aka iru nde mmadụ 8.1 ndị bu oria HIV ka na-achọpụta, ma ya mere enweghị ike inweta ọgwụgwọ na-azọpụta ndụ. “Ihu nje HIV na-agbanwe nke ukwuu n'ime afọ iri gara aga,…
Canine Coronavirus Ag Test , Kit , Nnukwu , Canine Coronavirus Ag Rapid Test Kit , Coronavirus Fcv Ag , Feline Coronavirus Test ,